पुरै गाउँलाई नै ‘उल्लु’ बनाएर २ करोड बढी रकम ठगेर भागिन् युवती, पीडितहरू मिडियामा! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > अपराध > पुरै गाउँलाई नै ‘उल्लु’ बनाएर २ करोड बढी रकम ठगेर भागिन् युवती, पीडितहरू मिडियामा! (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 23, 2020 अपराध, भिडियो, समाज	0
कोहलपुर । भिडियोमा हेर्नुस् सयौं ब्यक्ति एउटा हलमा जम्मा भएका छन् । सयौं मानिस न कुनै गोष्टि न सेमिनारका लागि जम्मा भएका भने होइनन् । एउटा पुरै गाउँलाई नै ठगी गरेर ४६ वर्यीया मनु वराल हराएपछि गाउँले यसरी भेला भएर न्याय माग्न आएका हुन् । घटना हो बाँकेको कोहलपुको । बाँके कोहलपुरकी ४६ वर्षीया मनु वरालले पुरै टोलका स्थानियलाई नै ठगी गरेर हराएकी छन् । उनले विभिन्न सहकारी संस्थावाट उनले लाखौं रुपैया लिएर हराएकी हुन् ।
उनले करिब दुई दर्जन बढी सहकारी संस्थावाट लाखौं रुपैया र केही स्थानियवाट पनि उनले पैसा लिएकी थिइन् । वरालले २ करोड भन्दा बढी रुपैया लिएर भागेपछि अहिले एक सय भन्दा बढी ब्यक्ति न्यायका लागि मिडियामा आएका हुन् । मनु वरालले एउटा गाउँलाई नै कसरी झुक्याउन सकिन त ? यो अचम्मको कुरा हो । यति ठूलो हिम्म त आँट कसरी गरिन् ? मनु माइती वर्दियाको बाँसगढी हो ।
उनलाई बाँसगढी छँदा देखि नै चिनेकी एक जना महिलाले विवाह अघि देखि पनि उनले समुहहरुमा खेल्ने गरेको देखेको बताइन् । माइतीमा समुहहरुमा बसेर ऋण लिन गरेको भएपनि यस्तो समस्या भने कहिल्यै नदेखेको बताइन् । वरालको श्रीमान मोटरसाइकल दुर्घटनाका कारण अहिले हिरासतमा छन् ।
बाह्रबिसेको भोटेकोशीमा भिषण बाढीपहिरो, जम्बुबजारमा धनजनको ठूलो क्षति (भिडियो हेर्नुस्)